စမတ်နာရီတွေအတွက် ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကို စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်မှာ မိတ်ဆက်မယ့် Qualcomm
Qualcomm အနေနဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်မှာ ပြုလုပ်မယ့်ပွဲအတွက် ဖိတ်စာတွေကို ပေးပို့နေပါပြီ။ အဲဒီဖိတ်စာက နာရီဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ်လို့ ပြသထားပြီး “It’s time. Set your watces.” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ပိုစတာအရ Qualcomm အနေနဲ့ နာရီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ Qualcomm အနေနဲ့ စမတ်နာရီသစ်တွေအတွက် ပရိုဆက်ဆာသစ်ကို ထုတ်ဖော်မိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 2100 ဟာ စမတ်နာရီထုတ်လုပ်သူတွေ အသုံးပြုနေကျ SoC ဖြစ်ပါတယ်။ Snapdragon 2100 ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ အခုမိတ်ဆက်မယ့် ပရိုဆက်ဆာအမည်က Snapdragon 3100 ဖြစ်ပြီး Snapdragon 2100 အတိုင်း 28nm node ပေါ်အခြေခံထားတယ်လို့ Winfuture.de က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Qualcomm အနေနဲ့ အဲဒီပွဲမှာ chipset နဲ့အတူ ပူးပေါင်းထားတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ စမတ်နာရီသစ်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းက စမတ်နာရီတစ်မျိုးနဲ့အတူ စမတ်နာရီတွေအတွက် chipset သစ်တွေကို ဒီနှစ်အတွင်း ဖြန့်ချိသွားမယ်လို့ Qualcomm ရဲ့အကြီးတန်းဒါရိုက်တာနဲ့ စမတ်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းအကြီးအကဲ ပန်ကာကီဒီယာက ပြောခဲ့ပါတယ်။
Wear OS အသုံးပြုထားတဲ့ စမတ်နာရီသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်သွားမယ့် ကုမ္ပဏီများစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေက Huawei, LG နဲ့ Google တို့ဖြစ်ပြီး Google အနေနဲ့ အောက်တိုဘာလမှာ Pixel3မိတ်ဆက်တဲ့ပွဲမှာ ကိုယ်ပိုင်စမတ်နာရီတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသမယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
Qualcomm ရဲ့ chipset သစ်မှာ စမတ်နာရီတွေအတွက် ambient mode အပါအဝင် feature သစ်တွေပါဝင်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘက်ထရီသက်တမ်းလည်း တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ထားဖွယ်ရှိပါတယ်။
Qualcomm အနနေဲ့ စကျတငျဘာလ ၁၀ ရကျမှာ ပွုလုပျမယျ့ပှဲအတှကျ ဖိတျစာတှကေို ပေးပို့နပေါပွီ။ အဲဒီဖိတျစာက နာရီဒိုငျခှကျထဲမှာ ၉ နာရီ ၁၀ မိနဈလို့ ပွသထားပွီး “It’s time. Set your watces.” လို့ ရေးသားထားပါတယျ။
ပိုစတာအရ Qualcomm အနနေဲ့ နာရီနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ အရာတဈခုကို မိတျဆကျဖှယျရှိပါတယျ။ Qualcomm အနနေဲ့ စမတျနာရီသဈတှအေတှကျ ပရိုဆကျဆာသဈကို ထုတျဖျောမိတျဆကျနျိုငျပါတယျ။
Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 2100 ဟာ စမတျနာရီထုတျလုပျသူတှေ အသုံးပွုနကြေ SoC ဖွဈပါတယျ။ Snapdragon 2100 ကို ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလမှာ ဖွနျ့ခြိခဲ့ပါတယျ။ အခုမိတျဆကျမယျ့ ပရိုဆကျဆာအမညျက Snapdragon 3100 ဖွဈပွီး Snapdragon 2100 အတိုငျး 28nm node ပျေါအခွခေံထားတယျလို့ Winfuture.de က ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
Qualcomm အနနေဲ့ အဲဒီပှဲမှာ chipset နဲ့အတူ ပူးပေါငျးထားတဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုရဲ့ စမတျနာရီသဈကိုလညျး မိတျဆကျဖှယျရှိပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့မလေတုနျးက စမတျနာရီတဈမြိုးနဲ့အတူ စမတျနာရီတှအေတှကျ chipset သဈတှကေို ဒီနှဈအတှငျး ဖွနျ့ခြိသှားမယျလို့ Qualcomm ရဲ့အကွီးတနျးဒါရိုကျတာနဲ့ စမတျထုတျကုနျ လုပျငနျးအကွီးအကဲ ပနျကာကီဒီယာက ပွောခဲ့ပါတယျ။
Wear OS အသုံးပွုထားတဲ့ စမတျနာရီသဈတှကေို ထုတျလုပျသှားမယျ့ ကုမ်ပဏီမြားစှာ ရှိပါတယျ။ အဲဒီကုမ်ပဏီတှကေ Huawei, LG နဲ့ Google တို့ဖွဈပွီး Google အနနေဲ့ အောကျတိုဘာလမှာ Pixel3မိတျဆကျတဲ့ပှဲမှာ ကိုယျပိုငျစမတျနာရီတှကေို ထုတျဖျောပွသမယျလို့ သတငျးထှကျပျေါနပေါတယျ။
Qualcomm ရဲ့ chipset သဈမှာ စမတျနာရီတှအေတှကျ ambient mode အပါအဝငျ feature သဈတှပေါဝငျတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဘကျထရီသကျတမျးလညျး တိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျထားဖှယျရှိပါတယျ။